अबैध कमाएको पैसा शेयरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? अब होसियार ! — News of The World
अबैध कमाएको पैसा शेयरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? अब होसियार !
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार स्रोत नखुलेको लगानीलाई थप कडाई गर्ने नीति लिइएको हो । सो नीति आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने भएको छ ।
बोर्डले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका, २०७४’ बोर्ड बैठकद्वारा उक्त नियम पारित गरेको हो । बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिका अनुसार नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए लगत्तै शेयर लगानीमा अदृश्य लगानी कडाइ गर्न उक्त नियम ल्याईएको हो ।